Ny Redmi Pro 2 miaraka amin'ny Snapdragon 855 dia hanana fifandraisana NFC, hoy i Lu Weibing | Androidsis
Ny Redmi Pro 2 miaraka amin'ny Snapdragon 855 dia hanana fifandraisana NFC, hoy i Lu Weibing
Telefaona vaovao miafina an'i Redmi, voalaza fa nantsoina Redmi Pro 2, ho avy tsy ho ela izy miaraka amin'ny chipset Snapdragon 855, ary alohan'ny hitrangan'izany, ny tale jeneralin'ny Redmi Lu Weibing dia nanambara tamin'ny alàlan'ny lahatsoratra Weibo vaovao izay nampidirina endri-javatra fanampiny amin'ny fitaovana.
Ny sainam-pirenena manaraka, izay mety ho ny fitaovana mora indrindra amin'ny SD855, dia hanohana ny NFC sy ny famandrihana tsy misy tariby. Tsara ny manamarika fa nanamafy bezela manify aza i Lu tamin'ny fitaovana manaraka izay ho avy tsy ho ela.
Tamin'ny volana lasa teo, nahita ny talen'ny smartphone Xiaomi Lei Jun, CEO Lei Jun. Saingy, tamin'izany fotoana izany dia tsy dia mazava loatra ny famolavolana fa, noho ny fanamafisana taorian'izay, nanamarina ny fisian'ilay fitaovana izy ireo.
Ny lahatsoratr'i Lu Weibing ao amin'ny Weibo momba ny Redmi Pro 2 miaraka amin'ny Snapdragon 855
Lu Weibing dia efa nanamafy ny endri-javatra sasany amin'ilay fitaovana, toy ny fisian'ny jack audio 3,5mm, modely fakan-tsary telo, sns. Mazava ho azy fa tsy izany ho fiafarana avo io, fotsiny ho an'ny mitondra ny SoC matanjaka indrindra an'ny Qualcomm.
Un horonantsary nivoaka farany vao haingana nanambara ny fananganana fakan-tsary telo miaraka amin'ny scanner an'ny dian-tànana any aoriana. Ankoatr'izany, ny eo aloha dia antenaina hitondra fisehoana feno amin'ny bezela kely, ny tahan'ny fakan-tsary amin'ny vatana, ary ny fakan-tsary famoahana lavaka, fa tsy toy ny andiany Galaxy S10, hipetraka eo afovoany ambony izy ity. toerana fa tsy eo an-joro.
Ny datin'ny fandefasana ny Redmi miaraka amin'ny Snapdragon 855 dia natolotry ny Lu Weibing
Ny orinasa sinoa dia matetika mamorona tsaho momba ny Redmi Pro 2, saingy ny famaritana sy ny masontsivana lehibe an'io fitaovana io dia mbola eo am-pitoerana. Misy ny milaza fa mety ho ofisialy amin'ny faran'ity volana ity ny telefaona vaovao. Alohan'izany, Redmi dia hampiseho ny Redmi Y3 amin'ny 24 aprily amin'ny fakantsary selfie 32 MP, fehezan-drano sy bateria lehibe kokoa.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » About us » Ny Redmi Pro 2 miaraka amin'ny Snapdragon 855 dia hanana fifandraisana NFC, hoy i Lu Weibing
Ny CEO OnePlus dia nanambara fa ny OnePlus 7 Pro dia hanana fampisehoana mahavariana
Tsia, tsy nanemotra ny fandefasana ny Mate X i Huawei